प्रधानमन्त्री ओलिलाइ ख,तरा : कस्ले समा,प्त गर्न खोज्दै छ ओलिलाइ ? यो हेर्नुहोस – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/प्रधानमन्त्री ओलिलाइ ख,तरा : कस्ले समा,प्त गर्न खोज्दै छ ओलिलाइ ? यो हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आफूलाई पदबाट ह’टाउन देशी/विदेशी शक्ति हावी भएको बताएका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू शक्ति नभई आफूले राजीनामा मागेको जवाफ दिएका थिए।
सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थ्रे’ट महसुस गरी योजना बनाइरहेका छन्। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सकभर कुनै कार्यक्रममा नजान सुझाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय जानुपर्ने अवस्थालाई ध्यान दिई सवारी रुट यकिन गरेर सुरक्षा योजना तय गरिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुवास गोतामेले लेखेका छन् ।